Su'aal: Markay is helaan ugxanta iyo shahwada ninka?
Author Topic: Su'aal: Markay is helaan ugxanta iyo shahwada ninka? (Read 3270 times)
« on: December 09, 2017, 10:31:58 PM »
aad baad umahadsanthn sida wanaagsan ee aad aqoontiina inoola qeybsaneysaan
illaah ha idinka abaal mariyo jazakalah. SLN kadib
dctr waxaan rabay inaan idin weydiiyo su aal, haduu illah idin garansiiyana aad iiga soo jawaabtaan.
suaasha waxay tahay
waxaan ognahay ugxanta dumarka in lasoo fasaxo maalinta 14 inta badan waa hadii ay gabdha caadadeedu tahay 28 maadama ay dumarku ku kala duwanyihiin jadwalka caadada ama wakhtiga caadada, marka hadii habeenka 14aad Jamac lasameeya , .majiraan wax calaamado ah oo lagu garan karo in ay is Helen ama kulmeen ugxantii gabadha iyo sperm ninka?
sideese lagu ogaan karaa?
Re: Su'aal: Markay is helaan ugxanta iyo shahwada ninka?
« Reply #1 on: December 02, 2018, 08:01:25 PM »
Maya, ma jiro wax la dareemo oo lagu ogaan karo in shahwada ninka ay bacrimisay ugxanta haweenka, haddii aad uur raadinaysaan fadlan akhriso talooyinka ku xusan qoraalkaan: http://somalidoc.com/smf/index.php?topic=5839.0
« Reply #2 on: July 06, 2019, 01:37:32 PM »
Views: 24006 December 18, 2015, 08:07:37 PM
Views: 19954 June 26, 2015, 02:38:58 AM
Views: 15750 July 10, 2011, 08:10:55 PM
Views: 3076 December 22, 2017, 03:27:38 PM
Views: 12885 December 20, 2018, 10:03:39 PM